A healthy sleep pattern ensures the next day full of energy esp for working adults and heavy load students. Sleep hygiene is a habitual activity that helps us fall asleep and maintain healthy sleep. Ukucoceka ngokungalunganga kunokuthintela umgangatho wokulala. Hence considered most people lack healthy sleep we hope the below small tips useful before you go to bed.
Imikhwa elungileyo yokulala
Wonke umntu ufuna ukuba nemikhwa elungileyo yokulala, kodwa ngophuhliso lwetekhnoloji, the quality of people's sleep has been declining. Ke, zeziphi izinto ezichaphazela umgangatho wokulala? Ngawaphi amanyathelo esinokuwathatha ukuphucula umgangatho wokulala? Inyaniso, umgangatho wokulala uhambelana nemeko yangaphandle kunye nendlela otya ngayo, kubandakanya okusingqongileyo, ixesha, umsebenzi kunye nokutya.
Apho silala khona kufuneka kulungele ukulala. Igumbi kufuneka lithule, kumnyama kwaye kukulinganisa kubushushu. Ukuba unokulala kuphela emini ngenxa yomsebenzi, Sebenzisa i-opaque blinds, shadows, or curtains. Le ndlela, if the light comes in through the window, it won't hit your eyes. Kwabo bangakwaziyo ukulala kwindawo ezolileyo, Ungadlala umculo opholileyo wokukunceda ulale.
Ibhedi yinxalenye ebalulekileyo yendawo yokulala. This includes pillow-top mattresses, iziseko kunye nokulala. Iipilisi kufuneka zixhaswe, ezinokunciphisa uxinzelelo oludibeneyo. Umva nentamo kufuneka zihlale zilungelelaniswe kakuhle. Ukuphuhliswa koyilo lwamatraksi lwala maxesha kujolise ekufezekiseni ibhalansi efanelekileyo phakathi kwenkxaso kunye nokukhutshwa koxinzelelo. Xa ukhetha umatrasi, qwalasela ubunzima bakho kunye nohlobo lomzimba kunye nemeko yakho yomzimba, kubandakanya iintlungu zangasemva, Intamo, isifo samathambo, bursitis, ukulala i-apnea, kunye ne-fibromyalgia.
Imizimba yethu iyilelwe isingqisho esijikelezayo, Umjikelo weyure ezingama-24 xa siphakama siwa, kuxhomekeka kuzinzo. Ukufika kwethu kwiindawo ngeendawo ezahlukeneyo ngexesha leyure, imizimba yethu ibingasasebenzi kunye nexesha lendawo kwindawo esiwa kuyo. Siya kubangela i-jet lag ngenxa yokutshintsha kwexesha. Ukuba utshintsha iishifti rhoqo kwiiveki ezimbalwa, qala ngokulungisa ixesha lakho lokulala ngokukhawuleza.
Phakathi kweeyure ezimbini ukuya kwezine ngaphambi kokulala, Ukuhamba usukelwa kukusebenza ngokuzola ukuya kwindawo ethe cwaka kukuvumela ukuba uqale ngokuphumla. Yenza umthambo ngexesha lasemini kwaye unciphise ukuzilolonga ebusuku. Cima umabonwakude onesiqingatha seyure ukuya kwi yure ngaphambi kokuba ulale, funda incwadi okanye ukhangele imifanekiso, kwaye uphephe ukuchukumisa izixhobo ze-elektroniki zesikrini. Ukuba kuyafuneka, ungathatha indawo yokulala ngexesha lasemini kwaye unciphise ixesha lakho lesidlo sasemini 30-45 imizuzu ukuze ingachaphazeli ukulala kwakho rhoqo.
Ukutya kwethu kufutshane nexesha lokulala kuchaphazela indlela esilala ngayo. Ukuba ulambile malunga neyure ngaphambi kokuba ulale, Nceda ulungiselele isidlo esilula, but not suitable for high-calorie foods, eziya kuchaphazela umgangatho wobuthongo kunye nexesha lokulala. Ikofu kunye nezinye iziselo zecaffeine zilungile ukuba zivuke kusasa kuba ziyanceda ukukuvusa, kodwa ngesizathu esifanayo, ayisiyokhetho elilungileyo kwiiyure ezintathu okanye ezine zokuqala zokuya kulala.
Izinto ezingaphaya kolawulo lwethu
Izinto ezininzi ezichaphazela indlela esilala ngayo ziphantsi kolawulo lwethu. But when we can't control certain key components of sleep hygiene, Kufuneka senze uhlengahlengiso ukuze silale kakuhle. Uninzi lwethu, Enye yezinto ezilawulwa kwabanye ngumsebenzi wethu kunye nexesha leklasi. Kufuphi, ukulala ngcono kwaye usigcine siphaphile kwaye silumkise ngexesha lasemini, we need to control what we can do and adjust what we can't. Ngokuqinisekileyo, a good mattress will help you sleep well, too. Yiyo loo nto, we recommend this model - spring and memory foam hybrid mattress to these who are troubled in sleeping.
Iimpawu: Buy sofa set, Isihlokomelo seNtwasahlobo
Ixesha lokuposa: 2020-04-15